Mariah Rakotondrabe na madame Mariah etsy Fort Duchesne, raha mbola resaka fitsaboana, raha naneho ny heviny mikasika ny vokatra Covid organics. Fanasitranana zavatra maro izany. Izaho dia faly sy misaotra ny filoham-pirenena, hoy hatrany ny tenany, raha namela ny mpikaroka malagasy hitady iny vokatra iny. Manan-karena isika, raha io resaka hazo sy zavaboahary mahasoa io. Tsy misy resaka hidiran’ny vaksiny io fa ny olantsika malagasy dia isika ihany no manambany ny tenantsika sy tsy mino ny zavatra vitantsika eto. Simban’ny serasera be loatra ny fiainantsika dia tsy mahita intsony ny soa azo tovozina eto amin’ny tanintsika, hoy hatrany ity mpitsabo nentim-paharazana ity.